ဖိတ်ကြားစာရေးသားနည်း၊ ဖိတ်ကြားခြင်းကိုလက်ခံခြင်း၊ ဖိတ်ကြားချက်ကို ငြင်းပယ်ခြင်း - Myanmar Network
ဖိတ်ကြားစာရေးသားနည်း၊ ဖိတ်ကြားခြင်းကိုလက်ခံခြင်း၊ ဖိတ်ကြားချက်ကို ငြင်းပယ်ခြင်း
Posted by Language Republic on October 12, 2012 at 10:33 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
An invitation (ဖိတ်ကြားစာ)
I would like to invite you to be our guest at the Brazilian Grand Prix in March. The event is being held at Interlagos and we would like you to join us for lunch at the track and for an evening dinner in Sao Paulo. Let me know if you can attend.
မတ်လမှာ ကျင်းပမဲ့ ဘရာဇီးလီးယန်းဂရဲ(န)ပရီးမှာ မင်းကို ဧည့်သည်တော်အနေနဲ့ တက်ရောက်ဖို့ ဖိတ်ချင်ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲကတော့ အင်တာလာဂို(စ)မှာ ကျင်းပမှာဖြစ်ပြီး ကားပြိုင်ကွင်းမှာ နေ့လည်စာနဲ့ စော(၀်)ပေါလိုမှာ ညနေစာကို အတူတူစားစေချင်ပါတယ်။ မင်းတက်ရောက်နိုင်မယ်ဆိုရင် ငါ့ဆီကိုပြန်ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
မင်းဆီက ဆက်သွယ်လာမှာကို စောင့်မျှော်နေမယ်။
ဒီအီးမေး(လ်)မှာ အသုံးပြုထားသော အခြားစာဟန်ပေဟန် အသုံးအနှုန်းများကို မှတ်သားထားပါ။ ရင်းရင်းနှီးနှီး ပြောလိုပါက အောက်ပါတို့ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
- Can you come to the Grand Prix? (ဂရဲ(န)) ပရီးကို မင်းလာနိုင်မလား?)
- I hope you can come to lunch. (မင်း နေ့လည်စာ လာစားနိုင်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်)
- Please come. (ကျေးဇူးပြုပြီးလာပါ)
၄င်းကို ပို၍ရင်းနှီးစွာ ပြောလိုပါက
- Let me know if your can make it. (မင်းလာနိုင်မလားဆိုတာ ငါ့ကို အကြောင်းကြားပါ။)
Accepting an invitation (ဖိတ်ကြားချက်ကို လက်ခံခြင်း)
Thanks for the invitation. I’d love to come and I look forward to seeing you then. Please send me details of the event when you have them.
ဖိတ်ကြားချက်အတွက် ကျေးဇူးပဲ။ ငါ သိပ်ကို လာချင်တာပေါ့။ ပြီးတော့ အဲဒီအခါကျမှ မင်းနဲ့တွေ့ရမှာကိုလည်း စောင့်မျှော်နေပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲရဲ့ အသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကို မင်းရတဲ့အခါ ငါ့ဆီကျေးဇူးပြုပြီး ပို့ပေးပါ။
ဖိတ်ကြားချက်တစ်ခုအတွက် ရင်းနှီးပြီး စိတ်အားထက်သန်သော တုန့်ပြန်မှု ဖြစ်သည်။ အခြားတုန့်ပြန်မှုများ -
- That would be great.(အဲဒါ အရမ်းကောင်းတာပေါ့။)
- That’sagreat idea. (အဲဒါ အရမ်းကောင်းတဲ့ အကြံဥာဏ်ပေါ့။)
- I’ll really look forward to it.(အဲဒါကိုကျွန်တော် တကယ်ပဲ စောင့်မျှော်နေပါမယ်။)
Event ဆိုသည်မှာ ထူးခြားသော အခမ်းအနားကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
- It’s going to beavery special event. (ဒါကတော့ အလွန်ထူးခြားတဲ့ အခမ်းအနားဖြစ်မှာပါ။)
- It tookalong time to plan the event. (ထူးခြားတဲ့ အခမ်းအနားကို စီစဉ်ဖို့ အချိန်အကြာကြီးယူခဲ့ရ တယ်။)
Declining an invitation (ဖိတ်ကြားချက်ကို ငြင်းပယ်ခြင်း)
Many thanks for your kind invitation to attend the Grand Prix. Unfortunately, I’ll be abroad on that day and I won’t be able to make it. I hope the event goes well for you and I look forward to seeing you soon.
ဂရဲ(န)ပရီးကိုတက်ရောက်ဖို့ စေတနာနဲ့ ဖိတ်ကြားလိုက်တာကို အများကြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကံမကောင်းချင်တော့ အဲဒီနေ့ ငါက နိုင်ငံခြားရောက်နေမှာဖြစ်လို့ ငါလာနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ပြိုင်ပွဲကြီးကတော့ မင်းအတွက်အောင်မြင်စေဖို့ မျှော်လင့်ပြီးတော့ မကြာခင်မှာ မင်းနဲ့တွေ့ဖို့ကိုလည်း စောင့်မျှော်နေပါတယ်။
kind ကဲ့သို့သော စကားလုံးကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မိမိ၏ကျေးဇူးတင်မှုရဲ့ လှိုက်လှဲမှုကို ပေါ်လွင်စေပါတယ်။
- It was very kind of you to invite me. (အခုလို ဖိတ်ကြားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
- Thank you for your excellent presentation. (ခင်ဗျားရဲ့ အလွန်ကောင်းတဲ့ တင်ဆက်မှုအတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။)
- Many thanks for the beautiful flowers.(ပန်းလှလှလေးတွေအတွက် ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်။)
Sorry (စိတ်မကောင်းပါဘူး)ကို မသုံးချင်တဲ့အခါ unfortunately (ကံမကောင်းချင်တော့) ကို သုံးနိုင်ပါသည်။
- Unfortunately, I’m going to miss the presentation. (ကံမကောင်းချင်တော့ တင်ဆက်မှုကို ငါ လွတ်တော့မယ်)
- I won’t be there, unfortunately. (ကံမကောင်းချင်တော့ ငါ အဲဒီမှာ မရှိဘူး။)
အောက်ပါတို့မှာ အစည်းအဝေး သို့မဟုတ် အခမ်းအနားတစ်ခုခုကို မတက်ရောက်နိုင်သောအခါ အသုံးပြုသော ရင်းနှီးသည့် မှတ်ချက်များဖြစ်သည်။
- I hope it all goes well. (အားလုံးအောင်မြင်စေဖို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။)
- Good luck with everything. (အရာရာတိုင်းမှာ ကံကောင်းပါစေ)
- I hope I’ll be able to come next time. (နောက်တစ်ကြိမ်ကျ လာနိုင်ဖို့ ကျွန်တော် မျှော်လင့်ပါတယ်။)
Permalink Reply by koyemyinttun on October 12, 2012 at 15:35
Permalink Reply by tinmaraye on October 12, 2012 at 16:11
Permalink Reply by 217n9e4792hr1 on October 12, 2012 at 17:29
Permalink Reply by YIN YIN PYONE on October 13, 2012 at 4:18
Permalink Reply by khinthidasoe on October 13, 2012 at 11:55
Permalink Reply by thant zin tun on October 13, 2012 at 13:47
Permalink Reply by AYE AYE MU on October 13, 2012 at 18:19
Permalink Reply by 150yviqpiqnjs on October 13, 2012 at 18:30
thanks for yr post
Permalink Reply by Khine Zar Pyae Phyo on October 14, 2012 at 1:47
Permalink Reply by Theingi Khaing on October 15, 2012 at 14:48
Permalink Reply by Zaw Zaw Aung on October 15, 2012 at 22:41
Permalink Reply by Thein May on October 17, 2012 at 13:18
It's pretty helpful. Thank you very much.